Revhitiko 19 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
19 Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti: 2 “Taura neungano yose yevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Munofanira kuva vatsvene,+ nokuti ini Jehovha Mwari wenyu ndiri mutsvene.+ 3 “‘Mumwe nomumwe anofanira kutya amai vake nababa vake,+ uye munofanira kuchengeta masabata angu.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu. 4 Musatsaukira kuna vanamwari vasina zvavanobatsira,+ uye hamufaniri kuzvigadzirira vanamwari vesimbi yakanyungudutswa.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu. 5 “‘Zvino kana mukabayira chibayiro chokugoverana kuna Jehovha,+ munofanira kuchibayira kuti mufarirwe.+ 6 Chinofanira kudyiwa pazuva ramunochibayira nepazuva rinotevera racho chairo, asi zvinosara kusvikira pazuva rechitatu zvinofanira kupiswa nomoto.+ 7 Zvisinei, kana chikangodyiwa pazuva rechitatu, chava chinhu chisina kuchena.+ Hachizogamuchirwi nomufaro.+ 8 Munhu anochidya achazvidavirira kukanganisa kwake,+ nokuti asvibisa chinhu chitsvene chaJehovha; uye mweya iwoyo unofanira kuparadzwa pakati pevanhu vawo. 9 “‘Zvino kana muchikohwa goho romunyika yenyu, hamufaniri kukohwa muchipedzeredza kusvikira kumucheto chaiko kweminda yenyu, uye hamufaniri kunhonga zvinosaririra pamunokohwa.+ 10 Haufaniriwo kuunganidza zvinosara+ mumunda wako wemizambiringa, uye haufaniri kutanha mazambiringa anenge akapararira omunda wako wemizambiringa. Unofanira kuzvisiyira anotambudzika nomutorwa.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu. 11 “‘Musaba,+ musanyengera,+ uye ngaparege kuva nomunhu anonyengedza mumwe wake.+ 12 Musapika zvenhema nezita rangu,+ kuti musvibise zita raMwari wenyu. Ndini Jehovha. 13 Usabiridzira wokwako,+ uye usaba.+ Mubayiro womunhu wemaricho haufaniri kugara usiku hwose uinewe kusvikira mangwanani.+ 14 “‘Usatuka matsi, usaisa chinopinganidza pamberi pebofu;+ asi unofanira kutya Mwari wako.+ Ndini Jehovha. 15 “‘Musaita zvisina kururama pakutonga. Usasarura akaderera,+ uye usada munhu mukuru.+ Unofanira kutonga mumwe wako zvakarurama. 16 “‘Usafamba-famba pakati pevanhu vokwako kuti uchere vamwe.+ Usatsvaka kuisa upenyu hwomumwe wako mungozi.+ Ndini Jehovha. 17 “‘Usavenga hama yako mumwoyo mako.+ Unotofanira kutsiura mumwe wako,+ kuti urege kuva nechivi saiye. 18 “‘Usatsiva+ kana kuchengetera vanakomana vevanhu vokwako mafi;+ ida wokwako sezvaunozviita.+ Ndini Jehovha. 19 “‘Munofanira kuchengeta mirau yangu: Usaberekesa zvipfuwo zvako norumwe rudzi. Usadyara mbeu dzemarudzi maviri mumunda mako,+ uye usapfeka nguo ine shinda dzemarudzi maviri, dzakasanganiswa.+ 20 “‘Zvino kana murume akarara nomukadzi, urume hwake hukabuda, mukadzi wacho ari mushandikadzi akavimbiswa kuroorwa nomumwe murume, asi iye asati ambodzikinurwa kana kupiwa rusununguko, ngavarangwe. Havafaniri kuurayiwa, nokuti akanga asina kusunungurwa. 21 Murume wacho anofanira kuuya kuna Jehovha kusuo retende rokusanganira nechinopiwa chake chemhosva, iro gondohwe rechinopiwa chemhosva.+ 22 Mupristi anofanira kumuyananisira negondohwe rechinopiwa chemhosva pamberi paJehovha nokuda kwechivi chake chaakaita; akanganwirwe chivi chake chaakaita.+ 23 “‘Zvino kana mukasvika munyika, mukadyara chero muti upi zvawo unodyiwa, munofanira kuona zvibereko zvawo sezvisina kuchena se“chikanda chepamberi” chawo. Ucharamba usina kudzingiswa kwamuri kwemakore matatu. Haufaniri kudyiwa. 24 Asi mugore rechina zvibereko zvawo zvose+ zvichava chinhu chitsvene chomutambo wokupembera nomufaro unoitirwa Jehovha.+ 25 Mugore rechishanu mungadya henyu michero yawo kuti uwedzere kukuberekerai zvibereko zvawo.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu. 26 “‘Hapana chinhu chamunofanira kudya pamwe chete neropa.+ “‘Musatenda mashura,+ uye musaita zvemashiripiti.+ 27 “‘Musagera bvudzi riri kumativi emisoro yenyu, uye musashatisa munogumira ndebvu dzenyu.+ 28 “‘Musacheka-cheka miviri yenyu nokuda kwomweya wakafa,+ uye musazvitema nyora. Ndini Jehovha. 29 “‘Usasvibisa mwanasikana wako nokumuita pfambi,+ kuti nyika irege kuita zvechipfambi, nyika yacho ikazara netsika dzokusazvibata.+ 30 “‘Munofanira kuchengeta masabata angu,+ uye munofanira kuremekedza nzvimbo yangu tsvene.+ Ndini Jehovha. 31 “‘Musatsaukira kumasvikiro,+ uye musabvunza vafemberi,+ kuti musvibiswe navo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. 32 “‘Unofanira kusimukira achena bvudzi,+ nokuremekedza munhu akwegura,+ uye unofanira kutya Mwari wako.+ Ndini Jehovha. 33 “‘Kana mutorwa achigara nemi munyika yenyu, musamuitira zvakaipa.+ 34 Mutorwa anogara nemi ngaave somunhu womunyika yenyu; uye munofanira kumuda sezvamunozviita,+ nokuti imi makava vatorwa munyika yeIjipiti.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu. 35 “‘Musaita zvisina kururama pakutonga,+ pakuyera, pakupima+ kana kuti pakuyera zvinhu zvakaita mvura mvura. 36 Muve nechikero chakarurama,+ zvokuyeresa zvakarurama, efa yakarurama nehini yakarurama. Ndini Jehovha Mwari wenyu, akakubudisai munyika yeIjipiti. 37 Naizvozvo munofanira kuchengeta mirau yangu yose nezvandakatonga zvose, uye munofanira kuzviita.+ Ndini Jehovha.’”